विगतमा दशैंको पहिलो दिन नै १ लाखभन्दा धेरै उपत्यकाबाट बाहिरिसकेका हुन्थे, तर यस बर्ष...???
आजको मिति : २०७८ असार ५, शनिबार
विगतमा दशैंको पहिलो दिन नै १ लाखभन्दा धेरै उपत्यकाबाट बाहिरिसकेका हुन्थे, तर यस बर्ष…???
काठमाडौं, ०२ कार्तिक। सरकारले भनेको छ, ‘जहाँ छौं त्यहीं नै चाडबाड मनाऔं।’ तर, दशैं मनाउन घटनास्थापनाकै दिन शनिबार दिउँसो काठमाडौं उपत्यकाबाट २१ हजार यात्रु बाहिरिएका छन्। यद्यपि, यस वर्ष दशैंमा काठमाडौं उपत्यका छाड्नेको संख्यामा भने उल्लेख्य कमी आउने देखिएको छ।
ट्राफिक प्रवक्ता रामेश्वरप्रसाद यादवले असोजमा ६ लाख २७ हजार यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएको जानकारी दिए। सोही अवधिमा ६ लाख १४ हजार जना भित्रिए। लामो तथा मध्यम दूरीको सार्वजनिक यातायात असोज १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएका थिए।
त्यसयता दैनिक १७ हजारदेखि २२ हजारसम्म यात्रु उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने गरेको प्रवक्ता यादवको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनपूर्व धेरैले उपत्यका छाडेका थिए।
यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीको सहकार्यमा उपत्यकाका विभिन्न १० स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सहायता कक्ष कलंकी, कोटेश्वर, गोंगबु, कोटेश्वर, बल्खु, गौशलालगायत स्थानमा छन्। सहायता कक्षमा लामो तथा मध्यम दूरीको भाडा विवरण राखिएको हुन्छ। थापाले गाडीले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नअपनाएको पाइएको बताए। निर्दोष घोरसाइनेले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
नारायणी, राप्ती लगायतका नदी किनारामा रहने बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध
बागलुङका नागरिकलाई खानेपानीको अभाव deeyanmedia.com/17434/	... See MoreSee Less
बागलुङ, ५ असार । सरकारले गरेको निषेधाज्ञाले घरमै बसेका बागलुङका नागरिकलाई खानेपानीको अभावले घरबाहिर ल्याउन थाल.....
शहरी क्षेत्रमा भन्दा गाउँमा कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै deeyanmedia.com/17432/	... See MoreSee Less
काठमाडौं, ५ असार । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको शुरुवातमा तनहुँका शहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै थियो । सुर...
इँटा भट्टाको खाल्डोमा एक बालकको शव भेटियो deeyanmedia.com/17429/	... See MoreSee Less
काठमाडौं, ५ असार । भक्तपुरमा इँटा भट्टाको खाल्डोमा एक जना बालकको शव भेटिएको छ । सेतो बि.एम इँटा भट्टाको कम्पाउन्डम...
सडक निर्माणमा लापरबाही, बस्ती जोखिममा deeyanmedia.com/17427/	... See MoreSee Less
बेनी, ५ असार । जोमसोम सडकखण्ड अन्तरगत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ पिप्ले गलेश्वर बजार कटान र पहिरोको जोखिम....
तपाइको आज : २०७८ असार ५ शनिवारको राशिफल deeyanmedia.com/17424/	... See MoreSee Less
२०७८ असार ५ शनिवार, नवमी - द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस - Jun 19, 2021 सुरुमा पाँचौंचन्द्रमा.....